Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2010 (1)
Q and A October 2010 (1)
1. မကြာခဏ ချောင်းဆိုးတယ်
2. အသက်ရှူ မဝလို့ပါ ဆရာ
3. ဒီလမှာ ရာသီ လာတာ
4. ပန်းသေတော့မယ်လို ခံစားရပါတယ်
5. When I sleep with my wife
Q: သူငယ်ချင်း တယောက်က မကြာခဏ ချောင်းဆိုးတယ်။ နည်းနည်း အေးလာတာနဲ့ ဆိုးတယ်။ ဆေးခန်း ပြရမှာလည်း ကြောက်တော့ ဆေးလေးဘဲသောက် ပြီးနေတယ်။ ပျောက်သွားရင် မသောက်တော့ဘူး။ မကြာခဏ ဘာကြောင့် ချောင်းဆိုးလည်း၊ အဲဒီလို မဖြစ်အောင် ဘာတွေ ရှောင်ရမလည်း၊ ဘယ်လိုဆေးတွေများ သောက်သင့်သလည်း။ သူငယ်ချင်းက မိန်းကလေးပါ။ နောက်တခုက သူ့ မျက်လုံးတွေဟာ ငိုရင် မျက်ရည် မထွက်ဘူး။ မျက်ရည်ထွက်တဲ့နေရာ ပိတ်နေတယ်လို့တော့ ပြောတယ်။ မျက်ရည် မထွက်တော့ သူငိုတဲ့အခါတိုင်း ခေါင်းမှုး၊ ခေါင်းကိုက်ဖြစ်တယ်။
A: ချောင်းဆိုးတာ ကြာတယ်၊ ခဏခဏ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဆေးစစ်ရမယ်။ Chest specialist အထူးကု ပြပါ။ Physician အထူးကုကိုလဲ ပြနိုင်ပါတယ်။ အနဲဆုံး ဆရာဝန်တဦးဦး ပြပါ။ အာခေါင်ကနေစ စစ်ရမယ်။ လည်ချောင်း၊ နောက်ဆုံး အဆုပ် စစ်ရမယ်။ ဓါတ်မှန် ရိုက်ဘို့ လိုချင်လိုမယ်။ သလိပ်စစ်တာ ခိုင်းချင်ခိုင်းမယ်။ ချောင်းဆိုး-ပျောက်ဆေး အားမကိုးပါနဲ့။ ပိုးသေတာ မပါဘူး။ အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖါးကောက်သလို ဖြစ်နေမယ်။ ဘယ်မှ မသွားနိုင်သေးသူဆိုရင် Amoxacylin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ် ၄-၅ ရက်သောက်ပါ။
မျက်ရည် မထွက်တာက မျက်ရည်လမ်း ပိတ်နေတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျက်ရည်လမ်း ပြန်ဖွင့်ပေးလို့ ရပါတယ်။
Q: အသက်ရှူမဝလို့ပါ ဆရာ။ သတိထားမိတာ ၂ လ ၃လရှိပါပြီ။ ကျွန်တော် ဘာဆေးသောက် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ အကြံဥာဏ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
A: နှာခေါင်းထဲမှာ အလုံးလို တခုခုရှိနေသလား။ မှန်ထဲကြည့်ပါ။ တယောက်ယောက်ကို ကြည့်ခိုင်းပါ။ ရာသီဥတု အပြောင်း အလဲမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ နှာရည်ယိုသလား။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် Antihistamine စားဆေး။ ရှူဆေး သုံးရတယ်။ ဆေးဆိုင် တိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ နောက်တခုက သွေးအားနည်းနေရင်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ အသားအရေ ဖြူရော်နေသလား။ လိုအပ်ရင် Hb စစ်ပါ။
Q: ဆရာ ဒီလမှာ ရာသီ လာတာ ၁၆ ရက်နေ့ကပါ။ အခု ၂၉ ရက်နေ့ မှာ ရာသီပြန်လာနေလို့ပါ။ လမကုန်သေးပဲ ရာသီ လာတာ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ Ecee2 သောက်လို့လား။ စိုးရိမ်ရပါသလား။
A: ဆေးကြောင့်ပါ။ ရာသီရက်လဲ ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ နောက်ဆိုရင် ကြိုတင်မှု ကောင်းကောင်းလုပ်ပေါ့။
1 Oct 10, 10:47
Q: ကျွန်တော့် အသက် ၂၅ နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ ကျွန်တော်ကိုယ်ကို ပန်းသေတော့မယ်လို ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျား။ လိင်တံက အရင်လိုမျိုး သ်ိပ်မမတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျား။ ကျွန်တော် Viagra ဆေးသောက်လို့ ရပါသလား။
A: ဒီအသက်မှာ ဒီအဖြစ်မျိုး အလွန်မတန် ရှားပါတယ်။ ပန်းညှိုးချင်တာရဲ့ အကြောင်းတွေ ပြင်လိုက်ရင် ဆေးမပါဘဲ ကောင်းနိုင်ပါမယ်။ ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ ရှာမတွေ့ရင် ပြောပါ။ Viagra သောက်လို့တော့ ရပါတယ်။
Oct 1, 2010 at 4:41 AM,
Q: I have one problem. When I sleep with my wife I finish very fast. Sometime as I touch to her organ my liquid comes out. If I can put my organ into hers I can’t play more than 30 seconds. I am working overseas and my wife also is working with me. We married6months ago. So my wife was not satisfied.
A: Don't worry. You areanormal man. It happens in early days and weeks. I hope you can read Burmese fonts there. So I included the article and3Q-and-As. Please try to correct. If you still have problem, ask me then.
Early ejaculation သုတ်လွှတ်စောခြင်း